Qorshayaasha safarka: Halkee ayay isku dhacaan Gen Z, Millennials iyo Gen X iyo halka ay isku waafaqaan?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Qorshayaasha safarka: Halkee ayay isku dhacaan Gen Z, Millennials iyo Gen X iyo halka ay isku waafaqaan?
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Daraasadda safarku waxay daaha ka qaadday isku -dhacyada iyo is -waafajinta Gen Z, Millennials iyo Gen X.
Gen Z waa jiilka ugu dhiirran ee leh in ka badan kala bar (51%) qorshaynta safarada caalamiga ah iyo 37% gudaha.
Gen X wuu ka labalabeeyay iyadoo 33% uusan u safrin magaalo kale muddo ka badan hal sano.
Nabadgelyada ayaa weli maskaxda ku haysa dhammaan jiilasha, iyada oo in ka yar kala badh jawaabeyaasha jiil walba ay sheegeen inay tahay walaacooda ugu sarreeya ee ku xeeran qorshayaasha safarka.
Daraasad cusub ayaa muujineysa in safarka Mareykanka uu yahay kan ugu sarreeya maanka qof walba, in kasta oo jiilalka ay ku kala qeybsan yihiin qaababka qorshayaasha safarka.
Waxaa jira qaybo ka mid ah safarka iyo qorshaynta Gen Z, Millennials iyo Gen X waxay isku raacsan yihiin - welwelka badbaadada, xanaaqa miisaaniyadda iyo rabitaanka tacaburro badan oo bannaanka ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kala qaybsanaan ka dhex jirta kooxahan - inta ay raadinayaan inay tagaan, inta jeer ee socdaalka, miisaaniyadda iyo waxa ay diyaar u yihiin inay lacag badan ku bixiyaan safarradooda.
Maaddaama Mareykanku u fiirsanayo inay safraan, Millennials -ka iyo Gen X waxay u dhow yihiin Guriga halka Gen Z uu u muuqdo mid caalami ah
Dadka Mareykanka ah waxay ku jireen karantiil iyagoo sugaya maalinta xannibaadaha socdaalka inay fududaadaan waxayna bilaabi karaan inay qorsheeyaan marin -u -helidda mar kale.
Intooda badan jawaabeyaasha jiilalka (70%) waxay bilaabeen qorsheynta fasaxyadooda, laakiin halka dadku aadayo way kala duwan yihiin.
Magaalooyinka caalamiga ah ee ugu sarreeya safrayaasha Mareykanka waxaa ka mid ah San Juan, Dubai, Cyclades iyo Paris.
Socdaallada Gen Z waxay ka faa'iideysan karaan meelaha ugu badan ee ay u aadaan dibedda iyagoo leh waayo -aragnimo aan la ilaawi karin sida doon biyo -biyood ah iyo socdaalka ilaha kulul ee San Juan, safari cidla ah Dubai, jasiiradaha Folkaanaha ee ku socdaalaya Cyclades iyo fasalka dubitaanka macaroon ee Paris.
Ku dhawaad ​​kalabar Millennials (48%) iyo in ka badan kala bar Gen Xers (61%) ayaa qorsheynaya inay joogaan gudaha. 35% ee Millennials -ka iyo 20% Gen Xers waxay raadinayaan inay tagaan caalami.
Gen Z iyo Millenniyadu waxay ka faa'iideysanayeen xayiraadaha safarka ee qaadista - 37% Gen Zers iyo 34% Millenniyadu waxay u safreen magaalo kale bishii la soo dhaafay. Dhinaca kale, Gen X wuu ka labalabeeyay iyadoo 33% uusan u safrin magaalo kale muddo ka badan hal sano.
Jiilalka oo dhan ayaa aad ugu hanqal taagaya inay u safraan xeebta - marka hore ku darajo, buuraha, magaalooyinka iyo baadiyaha. Xeebaha la doonayo ee Miami iyo San Diego waxay u badan tahay inay soo degeen meelahaas afarta magaalo ee ugu sarreeya Mareykanka ee Gen Z, Millennials iyo Gen X.
Xeebta ka sokow, Gen Z iyo Millenniyadu sidoo kale waxay ku faraxsan yihiin inay sahamiyaan magaalooyin cusub - meelaha ay qorsheynayaan inay ku booqdaan gudaha Mareykanka waxaa ka mid ah New York City, Miami, Los Angeles iyo San Diego.
Gen X wuxuu raadinayaa inuu qorsheeyo booqasho New York City, Miami, San Diego iyo Washington, DC
Socdaalka Hore ee Maalinta Koowaad: Sirdoonka macmal ah waa dhab
Socdaalka caalamiga ah ee soo gelitaanka ayaa soo noqday tallaabo muhiim ah...
Bahamas hadda waa waddan ammaan u ah Mareykanka ...
Shiinaha iyo Dominica ayaa hadda u furmay socdaal u dhexeeya labadooda...